China Brass manifold emepụta na soplaya |Xinfan
Akwụkwọ ikike: afọ 2 Nọmba nlereanya: XF20162B
Aha ngwaahịa: Brass Manifold Okwu: Igwe ọkụ ọkụ
Ike Ngwọta Brass Project: Eserese eserese, ihe nlere 3D, ihe ngwọta zuru oke maka ọrụ, mkpokọta ngalaba Cross
Ụdị: XF20162B Nkọwapụta
Kedu otu esi ahọrọ ezigbo manifold?
1. Lelee ma ọ na-egbo mkpa kpo oku.
Ihe nkesa mmiri a na-ejikarị n'ahịa gụnyere ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara, na ihe ndị ọzọ sịntetik.Ihe dị iche iche nwere ọnụ ahịa dị iche iche na arụmọrụ kpo oku.Ya mere, mgbe ị na-ahọrọ ihe nkesa mmiri, ị ga-ahọrọ ihe kwesịrị ekwesị maka ihe nkesa mmiri dị ka mkpa kpo oku gị si dị ka ịzere mmetụta ọ bụla na-eme n'ọdịnihu.
2. Ghọta ma ihe owuwu ngwaahịa ahụ nwere ike ịwụnye ngwa ngwa.
Echichi nke ala ikpo ọkụ mmiri separators chọrọ ụfọdụ nkà, ya mere tupu ịzụrụ, ọ dị mkpa ịghọta nke ụdị nkesa mmiri ka mma iji wụnye na ndị ọzọ dabara maka gị onwe gị ojiji nke ụlọ.Ụzọ nrụnye a na-ahụkarị nke ihe nkesa mmiri bụ: ịgbado ọkụ na ịgbakọta.Ọ dị mkpa ịhọrọ usoro nrụnye kwesịrị ekwesị.Nke a bụ nkà dị ukwuu mgbe ị na-azụta ihe nkesa mmiri.
3. Ihe dị mma ga-adị mma.
Iji belata ngbanwe ego nke onye na-ekewa mmiri mgbe ị na-azụrụ ngwaahịa, ị kwesịrị ịtụle ma ihe ahụ na-adịgide adịgide.Dịka ọmụmaatụ, nkwụsị nke oxidation na nkwụsị corrosion nke ihe onwunwe, na ma ọrụ kpo oku ga-emepụta ọtụtụ ọnụ ọgụgụ.
4. Nkà na ụzụ nhazi kwesịrị ịbụ kpọmkwem.
Mgbe ị na-azụta ihe nkesa mmiri, ọ dị mkpa ileba anya nke ọma na ogo nke nhazi ihe.Ọ bụrụ na ịdị mma nke nkewa mmiri na-esi ike na àgwà ngwaahịa adịghị mma, ọ ga-emetụta ọrụ nkịtị nke ikpo ọkụ nke ala, na n'ọnọdụ siri ike, ọ ga-eme ka ihe ize ndụ dị ize ndụ n'ihi akụkụ ndị na-adapụ.
Nke gara aga: Brass Manifold